"(Hoy Jesosy:) Tomoera amiko ary Izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miray amin’ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo, raha tsy miray amiko." Jaona 15:4
"Miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo." 1 Korintiana 15:58
Amin’izao fiainana hazakaza-dava izao, rehefa maro dia maro ny zavatra tokony hatao etsy sy eroa, na ny kristiana be herim-po indrindra aza, dia indraindray mandalo fotoana mahakivy. Be loatra izy izany! Mitebiteby ihany izy, mandinika izay mety ho azony foanana ; miezaka izy hahay handamina kokoa. Mbola be loatra ihany! Tototra izy, difotra anaty fandaharam-potoana hipoka dia hipoka, asa ivelany mihoa-pampana izay toa tsy misy azo avela.
Rehefa tsapany fa tsy afaka miatrika ireo adidy ireo intsony izy, fa manjary milina, nefa tokony hiasa velombelomin’ny fitiavana kristiana, dia inona no azony atao ? Tsotra ihany: manaiky fa ny fahasahiranany dia sady avy amin’ny fiomanana tsy ampy, no avy amin’ny asa be loatra. Tokony hokolokoloiny ny fiainany anaty.
Mora hadinontsika tokoa mantsy, fa alohan’ny hanaovan-javatra dia tokony hanana ny maha isika antsika isika. Ny fepetra voalohany ahafahana miasa, dia fiainana anaty matanjaka sy lalina, hazonina hiombona lalandava amin’Andriamanitra. Izany ihany no ahafahana manao asa ankasitrahin’Andriamanitra. Fahamarinana fototra izany, saingy hadino amin’izao fotoana andrerahantsika tena matetika izao, amina ezaka sady tsy ilaina akory no mahakivy, any amin’ny sehatra isan-karazany any.
Ahoana no hamelombelomana izany fiainana anaty izany? Mifantoka amin'ny zava-panahy, mivavaka, mamaky am-paharetana ny Baiboly, mihaino ny Tompo, mikatsaka fiombonana aminy. Tsy very foana, sanatria, izany fotoana iarahana aminy izany. Ao aza isika no tena manovo ny hery ara-panahy ilaina amin’ny asa fanompoana Azy.